कि’रा फ’ट्यां’ग्राका लागि पनि मा’स्क बनाउँदै रुसी कलाकार
रोचक कि’रा फ’ट्यां’ग्राका लागि पनि मा’स्क बनाउँदै रुसी कलाकार
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) को कारण अहिले विश्वभरका मानिसहरुमा स्वा’स्थ्य सतर्कताका उपाय अपनाउने बानीको विकास भएको छ ।
अहिले घरबाट बाहिर निस्किँदा धेरै मानिसहरुले मास्क लगाएर निस्किने गर्छन् । मानिस बाहेक अन्य जीवज’न्तुहरुको सु’रक्षाको लागि पनि मा’स्क आवश्यक हुन्छ होला ? यो प्रश्न सुन्दा धेरैलाई वा’हियात लाग्नु स्वाभाविक हो ।
तर, रु’सका एक कलाकारले भने स–साना की’राहरुको सुर’क्षाका लागि भन्दै सु’क्ष्म मास्क निर्माण गरिरहेका छन् । रु’सी कलाकार एनाटोली कोनेकोले अहिले बा’रुलो, फ’ट्यांग्रा, ड्र्या’गनफ्लाई (गाइने कि’रा) र गं’गटोका लागि उपयुक्त हुने मा’स्क बनाइरहेका छन् ।
उनले की’राहरुलाई पनि बचाउनु आवश्यक रहेको सन्देश दिन यस्तो मास्क निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । उनले अहिलेको कठिन समयमा मानिसहरुले मानिसहरुलाई मात्र कसरी बचाउने भन्ने विषयमा नभई ज’नावरहरु र की’राहरुको सुरक्षाको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मैले की’राहरुलाई पनि बचाउनु जरुरी छ भन्ने सन्देश दिन केही मास्कहरु बनाइरहेको छु ।’ मानिसहरुले उनीहरुलाई पनि बिर्सिनु नहुने उनको धारणा छ । कोनेको सुक्ष्म सामग्री निर्माणको क्षेत्रमा चर्चित व्यक्ति हुन् । उनले यसअघि सबैभन्दा सानो किताब बनाएर गिनिज बुकमा आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका छन् ।
खाली पे’ट लसुन खानुका फाइदा यस्ता छन्- उच्च र’क्तचाप नियन्त्रण- बिहान खाली पे’टमा लसुनको केही केश्रा नियमित रुपमा खानाले र’क्तप्रवाह सन्तुलित गराउने तथा मु’टुसँग सम्बन्धित विभिन्न खाले सम’स्याका साथै कले’जो तथा मु’त्रथैलीको सं’क्रमणको जोखिम समेत कम गर्छ ।
– झा’डापखा’ला नियन्त्रण- सामान्य खाले झा’डापखा’लको उ’पचारका लागि लसुनको सेवन हितकर हुन्छ । बिहान खाली पे’टमा लसुन चपाउनुहोस्, त्यसले झा’डाबा’न्तामा फाइदा पुग्छ ।
– भोक लाग्दैन ? लसुन खानुस्- लसुनले पाच’न क्रियालाई नियमित गर्दछ र भोक बढाउन मद्दत गर्दछ । यसले तनाव कम गर्नुका साथै पे’टमा हुने अम्लपना समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पूराउँछ ।
– द’म, निमो’निया, ब्रों’काइटिस, चिसो लाग्ने समस्या तथा खो’की लगायतका स्वा’सप्रस्वा’स जन्य समस्याको घरेलु उ’पचारमा लसुन निकै उपयोगी सिद्ध हुन्छ ।
– लसुनको नियमित सेवनले क’ब्जियतको समस्या समेत कम गर्दछ ।
भुटेको लसुनको फाइदा लसुनलाई भुटेर सेवन गरेमा विशेषगरी पुरुषका लागि निकै फलदायी साबित हुन्छ । लसुनलाई काँचै वा तरकारी र अचारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
लसुनमा सल्फरको मात्रा केही बढी हुन्छ भने ‘ऐ’लिसिन’ नामक तत्व पनि हुन्छ, जसले एन्टी–ब्या’क्टेरियल, एन्टी–फं’गल र एन्टी ओक्सिडेन्टजस्ता गुण उत्पादन गर्छ । एक अध्ययनले लसुनमा पाइने ‘फा’इटोकेमिकल्स’ तत्वले पुरुषको स्वा’स्थ्यलाई विशेष फाइदा गर्ने पत्ता लागेको छ ।
यस्तै, आयुर्वेदका चि’कित्सकले पुरुषलाई रातिमा भुटेको लसुनको एक पोटी खाने सल्लाह दिन्छन्, जान्नुहोस् यसले के–कस्ता फाइदा गर्छ ।
१) पे’टको समस्या कम: हरेक दिन भुटेको लसुन खानाले हाम्रो पे’टमा ग्यास भरिदैन । यसले गर्दा हामीलाई ग्या’स्ट्रिक जस्तो समस्याले सताउदैन । यसले खाना पचाउन मद्धत गर्ने भएकाले क’ब्जियतको समस्या देखी मुक्त हुन सकिन्छ ।
२) रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ: हरेक दिन भुटेको लसुन खानाले हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ । यसमा पाइने एन्टी ब्या’क्टेरियल तत्वले विभिन्न प्रकारका ब्या’क्टेरियासँग लड्न मद्धत पुर्याउँछ ।
३) चिसोबाट बचाउँछ: तातो तेलमा लसुन पड्काएर शरीरमा लगाउनाले शरीरमा चिसो छिर्न पाउदैन । यसले गर्दा हामीलाई रु’घाखो’की जस्तो समस्याले सताउदैन ।
४) दाँ’तको दुखाइ कम: यदी तपाई दाँ’त दुखेर हैरान हुनुहुन्छ भने दाँ’त दुखेको ठाउँमा भुटेको लसुन पिसेर लगाउनुहोस् । तपाईलाई यसले निकै आराम दिन्छ ।
५) रक्तचा’प नियन्त्रण: विभिन्न अध्ययनले दैनिक भुटेको लसुन खाने व्यक्तिमा रक्तचा’प सन्तुलित रुपमा रहने देखाएको छ । त्यसका साथै यसले र’गतलाई सफा राख्ने काम पनि गर्छ ।
६) ह’र्मोन ब्यालेन्स: भुटेको लसुन पुरुषको लागी निकै लाभदायक छ । यसमा पाइने ए’लिसिनले पुरुषको से’क्स हर्मोन सन्तुलित रुपमा राख्न मद्धत गर्छ ।